Ny ala Irati, ala beech any Eropa lehibe indrindra aorian'ny ala mainty | Vaovao momba ny dia
Maria | | Fialan-tsasatra, Inona no ho hita
Sary | Lugarnia
Any avaratry Espana no hahitanao ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra any Espana. Tsy mila mandeha any amin'ny Ala Mainty Alemana ianao vao hiditra amin'ny ala mikitroka sy hazo cemara misy vatan-kazo matevina sy lakandrano maitso. Adiny iray mahery miala an'i Pamplona amin'ny alàlan'ny fiara no misy ny Selva de Irati, iray amin'ireo tahiry voajanahary malaza indrindra ao amin'ny kaontinanta taloha. Ireo izay nitsidika azy dia nilaza momba izany, tsy isalasalana, fa toerana majika io.
1 Mahafantatra ny ala Irati
2 Ny zava-maniry amin'ny ala Irati
3 Ilay biby ao amin'ny Ala Irati
4 Ny tahiry Irati Forest
5 Ahoana no ahatongavana any amin'ny Ala Irati?
6 Rahoviana no hitsidika ny Ala Irati?
Mahafantatra ny ala Irati
Ny Irati Forest dia mamorona velaran-tany maitso midadasika 17.000 hektara eo ho eo izay mbola mitoetra tsara mandritra ny fotoana sy ny fihetsiky ny olombelona. Lasa ny fitrandrahana hazo izay niseho nandritra ny taonjato maro izay nanapahana ala lehibe hananganana ireo sambo niady tamin'i Angletera. Ny Reniranon'i Irati dia nampiasaina tamin'izany fotoana izany ho toy ny làlan'ny ony hitaterana ny vatan-kazo mankamin'ny famaranana hazo Sangüesa.
Ny famerenana voajanahary ny ala dia niaraka tamin'ny taha ambony amin'ny rotsakorana voajanahary izay niainana tao amin'ilay faritra ary mampiseho ny toedraharaha lehibe amin'ny fiarovana azy io ary ny fifandanjan'ny tontolo iainana tsirairay. Izany no antony mahatonga ny Ala Irati ho faritry ny fiainana tsy manam-paharoa, na zavamaniry na biby.
Sary | Uolala
Ny tahan'ny rotsak'orana any amin'ity faritra ity dia mahatonga ny tany ho feno ony sy riandrano izay misy ny fanamaivanana manahirana azy. Anisan'ireny, misongadina i Urtxuria sy Urbeltza, izay manatevin-daharana ny valan'ny herinandran-tanin'i Virgen de las Nief hamorona ny reniranon'i Irati.
Fahagagana mahatalanjona mahatalanjona izay hita any atsinanan'i Pyrenees ao Navarre, ao anaty vovo iray voahodidin'ny tendrombohitra manoloana ny lohasaha Aezkoa sy Salazar. Toerana midadasika sy tsy manam-paharoa hankafizanao ny tontolo iainana amin'ny hatsarany rehetra.
Ny zava-maniry amin'ny ala Irati
Ny 17.000 hektara ao amin'ny Ala Irati dia voaforon'ny karazan-java-maniry roa: ny cemara sy ny bibikely, na mifangaro na misaraka. Na izany aza, hazelnuts, hazo terebinta volom-borona, yews, hazo linden, maples, holly ary serval dia hita ihany koa.
Amin'izao fotoana izao ny beech, ny fir sy ny karazany hafa dia miara-monina amin'ny felotra, mosses, lichens ... ny karazany chromatic dia mahatratra ny fara tampony amin'ny fahatongavan'ny fararano, rehefa manome lalana ireo volontsôkôlà mafana sy mena ary mavo ny ravin'ny hazo.
Sary | Sira sy Rock
Ilay biby ao amin'ny Ala Irati
Ny ahitra mamirapiratra amin'ny havoana sy ny ala mikitroka amin'ny Selva de Irati dia toerana onenana sy fialofana ho an'ny biby dia maro an'arivony. toy ny amboahaolo, lambo dia, robina, finches, tohana fotsy, wren, martens, trout ary serfa. Ireto farany no mpiorina amin'ny fararano satria vanim-potoanan'ny hafanana sy ny fikotrokotroka, izay ezahin'izy ireo handresy ny vehivavy, miangona manerana ny ala.
Ny tahiry Irati Forest
Ao amin'ny Selva de Irati, misy tahiry voajanahary telo miaro ireo faritra sarobidy indrindra amin'ny tontolo iainana. Manakaiky ny sisin-tany miaraka amin'i Frantsa, eo amin'ny lohasaha Aezkoa, Ny tahiry Mendilatz dia misy, izay, noho ny fahasarotan'ny fidirany, dia nahatratra ny fikajiana tsara ny enclave satria tsy tratry ny fitrandrahana ala.
Iray amin'ireo tahiry hafa monina ao amin'ny Selva de Irati dia ny an'i Tristuibartea, eo amin'ny havoana avaratry ny tendrombohitra Petxuberro koa ao amin'ny lohasaha Aezkoa. Ity dia ala mikitroka oaka feno volo.
Ny ampahatelon'ny tahiry voajanahary an'ny Selva de Irati dia miorina eo amin'ny Tendrombohitra La Cuestion amin'ny velaran-tany 64 hektara, izay mahazo ny anarana Lizardoia satria io dia eo amin'ny tehezan-kavo avaratry ny tendrombohitra tsy fantatra anarana. Heverina ho toerana tena mahaliana ny Ala Irati izy io noho ny firafitry ny ala. Ireo lalana fidirana vitsivitsy sy ny fitokanana azy no nahatonga azy io ho ala beech lava indrindra amin'ny Penina Iberia manontolo, miaraka amin'ny santionany amin'ny habeny miavaka.
Sary | Fizahan-tany Navarra
Ahoana no ahatongavana any amin'ny Ala Irati?
Mba hidirana ao amin'ny Selva de Irati dia manana fidirana roa lehibe isika: Ochagavía, ny fidirana atsinanana misy ny ivon-toeran'ny mpandika teny voajanahary ary ampahafantarina ny mpitsidika ny làlana rehetra, ary Orbaizeta, ny ilany andrefana.
Ao amin'ny Casas de Irati, eo akaikin'ny hermitage an'ny Virgen de las N steal, misy ivon-toeram-baovao iray hafa ary tolotra serivisy samihafa ihany koa no atolotra. Ary any Arrazola dia misy koa iray hafa akaikin'ny ozinina fitaovam-piadiana Orbaizeta, nanambara ny Site of Cultural Interest tamin'ny taona 2007 noho izy harena sarobidy tamin'ny maritrano taonjato faha-XNUMX.
Rahoviana no hitsidika ny Ala Irati?
Ny fotoana rehetra dia tonga lafatra mba hidirana amin'ny natiora ary ho variana amin'ilay fahalehibiazana lehibe ampitainy. Na izany aza, ny fitsidihana ny ala Irati mandritra ny fararano dia manana hatsarana manokana sy tsy manam-paharoa noho ny fipoahan'ny loko hita taratra amin'ireo zavamaniry. Sary mahafinaritra izay hijanona ho voasoratra ao amin'ny retina mandrakizay. Ny fitsidihana dia azo atao samirery na amin'ny alàlan'ny fanakaramana ny serivisy iray amin'ireo orinasa any amin'ny faritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Ny ala Irati, ala beech any Eropa lehibe indrindra aorian'ny ala mainty
Ny morontsiraka tsara indrindra any Portugal